အာရှခန့် Hitchhiking - Roving ခရု - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Boris, Marta и မြန်မာနိုင်ငံ လူနှစ်ဦးတစ်ဦးကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့များနှင့်မေတ္တာ, အခွင့်အလမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများသို့သွားရောက်ကြည့်ဖို့အလိုဆန္ဒအားဖြင့်စည်းလုံးညီညွတ်နေတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအတူတကွခရီးသွားပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကုန်ရပြီ အာရှတစ်ဝှမ်း - လမ်းခရီးတလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လမ်းများတစ်လျှောက်တွင် hitchhiking ။ သူတို့ကခရု Roving နေကြသည်။
အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag များအတွက်အိုင်ဗင် Belchev:
အိန္ဒိယမှဥရောပကနေ hitchhiking ၏နှစ်နှစ်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးဦးတည်ရာသို့ရောက်ရှိပါပြီ။ သငျသညျအဘယျသို့အရေးကြီးပါတယ်လမ်း, မသွားချင်သည့်နေရာကိုကြောင်းသဘောတူပါသလား
Roving ခရုကနေ Boris:
ဆက်ဆက်, destination သည်အစဉ်အမြဲမယ့်တစ်ဦးမတရားအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံကိုယင်းကြောင့်ပွိုင့်ဖို့လမ်းနှင့်တစ်လျှောက်ဖြစ်ပျက်သမျှတည်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်အဓိပ်ပာယျ၏မှားယွင်းသောဒါပေမယ့်လည်းနှစျသိမျ့အသိကိုပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်အထူးသဖြင့်ငါတို့အဘို့အ, ဦးတည်ရာ setting ကိုအထူးအရေးကြီးပါသည်။ ၎င်း၏မရှိခြင်းကျနော်တို့ around- meandering ခွားနှင့်မသေချာမရေရာနေကြတယ်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ကိုခံစားရစေသည်။
အဲဒါကြောင့် အိန္ဒိယမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်နှင့်အိန္ဒိယသူ့ဟာသူအတွက်များစွာသောသေးငယ်တဲ့ခရီးစဉ်၏ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, ထိုသူတို့ရောက်ရှိအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောမဟုတ်ခဲ့ပေ။
သူတို့က fixed မဟုတ်, variable ကိုတည်ကြသည် ဖြစ်. , သေးငါတို့သည်သူတို့အထဲကနေသေးတယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသာတိကျတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကသူတို့ကိုအကြားအဆာခဲ့သညျ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေငါ hitchhiking အခါ, တဦးတည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းဖို့ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ တစ်ချိန်ချိန်သင်သည်သူတို့၏ကားထဲတွင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ကြပြီးရပ်တန့်ကြဘူးတဲ့သူတွေကိုမှာဒေါသထွက်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုစတင်ပါ။ သင့်ရဲ့ hitchhiking စဉ်အတွင်းသင်ယူသူပြည်သူများအကြားဘုံကဘာလဲ?
© Roving ခရု
အဘယ်အရာကိုဘုံဖြစ်ပါသည်သူတို့အားလုံးမျက်နှာများနှင့်ပုံပြင်များရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားကားများပဲပြည်သူများနှင့်အိတ်အပြည့်အဝကားများ, သို့မဟုတ်အတှေးနှင့်တစ်နေရာရာမှတစ်ဦးလျင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ hitchhiking ပင်စိတ်ကူးမသိရသည်အဘယ်မှာရှိသောနေရာများ၌ကြီးသောအလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းနယ်လှည့်တစ်ဦးတစ်လောကလုံးလမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး (နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်မဟုတ်သည့်) နှစ်ခုရဲ့အဓိကအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောလမ်းတလျှောက်တွင်တစ်ဦးတည်းမောင်းနှင်နှင့်အတူပျင်းကြောင့်ပြည်သူ့ရပ်တန့်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုကူညီပျော်ရွှင်နေကြသည်။ အကြောင်းမူကား, သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏လှုံ့ဆျောမှုတစျခု hitchhikes ရှိရာကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သူတို့ကအတိအကျသူတို့အားအရာနှစ်ခုအတွက်ဆင်တူသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံကျကျ hitchhiking မသိသောအရာတစ်ခုခုနှင့်အပြန်အလှန်အကူအညီတစ်ခုပေါ်ထွန်းခြင်းတွေ့ဆုံရန်ဆန္ဒ, မဟုတ်ရင်အချည်းနှီးသောအမတ်နေရာတက်ယူပြီးကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့်, တကယ်အံ့သြစရာပါပဲ။ ထအပေါ်သူ၏လက်မနှင့်အတူရပ်နေသည်ကိုဘီးနောက်ကွယ်မှလူတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးကူညီခြင်းလက်ချေး၏သူ / သူမ၏လမ်း၏ monotony ပေါ့ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ခံစားရရန်အဘို့အတစ်အခွင့်အလမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းလူတစ်ဦးများအတွက်ခရီးသွားတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ငွေရေးကြေးရေးလွယ်ကူသောလမ်း, လမ်းမ။
မကြာသေးမီကကျွန်မသူငယ်ချင်းထက်ပိုသောနှစ်နှစ်ဘန်ကောက်ဘာမင်ဂမ်ကနေ pedaling ခဲ့သောစက်ဘီးစီးနှင့်ပြောဆိုသော။ ကျနော်တို့သမျှကျနော်တို့လမ်းတဦးတည်းအပေါ်, ခရီးမစတင်မီခဲ့စိတ်ကူးများအမှန်တကယ်ဖြစ်ကောင်းဒီအိမ်မှာဖြစ်မည်ကိုအဖြစ်အလားတူလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲဘယ်လိုစကားပြော; တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနီးပါး imperceptibly, သင်အပြောင်းအလဲကိုဆုပ်ကိုင်မတိုင်မီလုံလောက်သောအချိန်ကြာမှလိုအပ်ပါသည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျနော်တို့သို့သော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတခါတရံအစွန်းရောက်များနှင့်အစဉ်အမြဲထူးခြားဆန်းပြားနောက်ခံမှလျှက်ရှိကြောင်း, ငါတို့အဆက်မပြတ်ကိုယျ့ကိုယျကို reinvent နှင့်ပြန်လုပ်သောခံစားမှု, ဆဲအတူတူ Boris နှင့် Marta ရှိသည်။ နှင့်အာရှနှင့် ပတ်သက်. ပါကအားလုံး၎င်း၏မွေးရာပါပြဿနာတွေနဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့ပဲအခြားလူ့စကွဝဠာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာဝေးလံသောနှင့်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်, အမြဲဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဤဧကန်အမှန်အာရှသားမကြာခဏဥရောပသွား၏အိပ်မက်မက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အိပ်မက်အမြဲနှင့်နေရာတိုင်းအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့စကားစပ်နှင့်ရှုထောင်သာလျှင်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အောင်မြင်မှု, ကြွယ်သဘောပေါက်, တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပင်ကျန်းမာရေးမြောက်မြားစွာအရိပ်ထဲမှာလုပ်ပါတယ်နှင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာဓနများအတွက်အလွန်စံပြ, လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အခြေအနေ, ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ယုံကြည်မှုများနေရာအရပ်မှ, ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုရေးအလွှာပေါ် မူတည်. အဖြစ်, သင်တန်း, တိုင်းလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးချင်းစီယုံကြည်ချက်အပေါ်မသာအလွန်လွယ်ကူစွာကွဲပြားခြားနားသည်။ အခြေခံကျကျသို့သော်အိပ်မက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတိအကျတူညီကြသည်။
အနည်းငယ်ကံကောင်းခြင်းများနှင့်လုံ့လဝိရိယနှင့်အတူ, ငါ့စတိုင်ကိုသာသူငယ်တန်းအတွက်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါထိုကဲ့သို့သောအရာရာ၌ပါဝင်ပတ်သက်ရ သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်င်။
Marta သို့သော်ယခုအချိန်အထိပိုကောင်းကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသည် ခဲတံ, စုတ်တံနှင့်အရောင်များ ငါတနေ့သူနဲ့တူရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားပါလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာပါတယ်။
ကြောင်ယက်အားဖြင့်လူ့ဖိနပ်များကလေးလေး - ပထမတဖုန်ထူ, ဖုန်လမ်းတလျှောက်ရွေ့လျားမှုအတွက်အေးခဲခြေလှမ်းများ၏ရှစ်ထုတ်, ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ရွက်ဖျင်တဲ, yurts, လက်ဖက်ရည်ခွက်များ, ဗလီ, ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း, ထန်းရွက်, အာရှ features တွေနှင့်အတူရင်ဆိုင်နေရ, အဆင်တန်ဆာ, ပုတီး: နောက်တဦးတည်းကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ခရီး၏ motif အတူအဆင်ပြေသူတို့ရဲ့ဘို့တင်ခြင်း, ကြောင်တစ်ကောင်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုဖုန်ထူကုလားအုပျဖွစျလိမျ့မညျ ဆံပင် ... ဒါပေါ်, ဒါပေါ်မှာ ... အတောမသတ်, တစ်ဦးတိဘက်ဘုန်းကြီးကျောင်း, Taoist ပန်းအိုးသို့မဟုတ်အာရှအလယျပိုငျး shirdak, ပါရှနျပန်းချီကားတစ်ဟိန္ဒူဗိမာနျတျောထွင်းထု၏နံရံကဲ့သို့အသေးစိတျနှငျ့ပွညျ့စုံ ...
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလမျးပျေါမှာ run ပါသနည်း သငျသညျတစျနေ့ကိုရှေးခယျြကအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာနေ့စဉ်ဘဝမှာတစ်ဦးကမုန်တိုင်းအပြီးတောင်စီးနဲ့တူစီးဆင်း။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်နှင့်သာသေချာအရာတစ်ခုချင်းစီကိုနေ့ကကျွန်တော်အိပ်ပျော်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုးထပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နာရီမည်မျှအကြာတွင်ကိုသိဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, မကြာသေးမီကကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်ခြင်းခြင်းမရှိဘဲ, Marta သူမ၏ခေါင်းအုံးနှင့်နောက်တစ်နေ့နံနက်အောက်မှာမြွေ smothered ငါတို့သည်သီချင်းကိုအားဖြင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌အုတ်တစ်လိုင်း setting ပြီးနောက်သူအများတို့သည်ပဌနာနှင့်တစ်ဦးမြွေမုဆိုးများ၏ထူးထူးဆန်းဆန်းထုံးတမ်း awoken ခဲ့ကြသည် တံခါးများနှင့်ရေနှင့်အတူသူတို့ကိုလောင်း, ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတည်းခိုရာအိမျတျော၏ခြံတစ်အိတ်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်လုပ်, သူ့အလုပ်တစ်ရက်ပဲစတင်မိသောကြောင့်ထို့နောက်ပျာကသီ left, အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်မြွေဆိုးတစ်ဦးစုဆောင်းမှုကိုစုဝေးစေ။
နေ့လည်တစ် Yogi သွားရောက် လာ. , သူကအခိုင်အမာသူ 280 နှစ်ရှိပြီကယုံကြည်သည်။ ဒေါသထွက်နေတဲ့မျောက်တို့က လိုက်. ခံရစဉ်အတောအတွင်းမြန်မာ, အိမ်နီးချင်းများ၏ကြက်လိုက်ဖမ်းခဲ့သည်။ ငါတို့သည်နောက်လာမည့်လမ်းမှတစ်ဦးစွန့်ပစ်အဆောက်အဦး၏မွမှေုနျ့၌နိုးထလာသောအခါရက်ပေါင်းခဲ့နှင့်ပင်လယ်ကရေကူးကန်နှင့်အတူအိမျတျော၌အိပ်ပျော်လျက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့် idyllic တည်နေရာအတွက်ရွက်ဖျင်တဲကိုတက်ထားအခြားသူတွေရသောပါပြီ သာကောင်းကင်ပြာအတွက်စိတ်အားထက်သန်ရယ်မောခြင်းနှင့်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်နိုးထရန်။
ဒါမှမဟုတ်သာ hitchhike အခါရက်ပေါင်း, တပြည်လုံးစိတ်ဓါတ်များနှင့်ယာဉ်မောင်းများ၏ဇာတ်ကောင်အပေါ်မူတည် ... အများစုကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဖက်ရည်နှင့်ဘီစကွတ်ပူဇော်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြန်ပေးဆွဲနိုင်လျှင်တဦးတည်းနေပါစေ ... ယဉ်ကျေးများနှင့်ပြုံး, ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမလျှောက်သောဖြစ်ပျက် ဘယ်လောက်ကျနော်တို့ကတခါတရံကျနော်တို့နေဆဲပင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်တဲ့သေးငယ်တဲ့ရိုးရာဓလေ့တူတစ်ခုခုထူထောင်ရန်ပျက်ကွက်ချင်တယ်။
သငျသညျခရီးသွားမှတပါးတခြားဘာမှပေမယ့်အလိုဆန္ဒမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းသက်သေပြ။ အကြံဉာဏ်ကိုသင့်ရဲ့အပိုင်းအစထိုကဲ့သို့သောခရီးအပေါ်ဆုံးဖြတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာချင်မပေးနိုငျသောသူတို့အားအဘယ်အရာဖြစ်ပါ့မလား
တိုင်းခရီးတဲသို့မဟုတ်တောင်ပေါ်မှာအနည်းငယ်ညများအတွက်တဲအတွက်မြို့ဆင်ခြေဖုံးမှဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအသုံးပြုပုံအဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းသို့မဟုတ်ပန်းခြံတစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှလမ်းလျှောက်အတူအိမ်တံခါးကနေအစပြုထားသည်။ ဆန္ဒကြီးထွားဖို့ဆက်လက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာဝေးတဲ့ဝေးတစ်လတစ်ဦးဗန်နှင့်အတူ, စက်ဘီးအသုံးပြုပုံ hitchhiking လမ်းလျှောက် ... ဒါ, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကပဲရှေ့ကိုသငျသညျမိတ်ဆက်။ အနည်းဆုံး, ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်ကားအဘယ်သို့ငါတို့သည်အလုပ်လုပ်တယ်သေချာပါသည်။
သင့်ရဲ့ site ကိုတွင်တဦးတည်းကသင်၏ခရီးစဉ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့တဲ့စာအုပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အစစ်အမှန်ပုံပြင်များနှင့်အရာရှိစိတ်ကူးယဉ်သူများဖြစ်ကြ၏ဘယ်ရှိပါသလဲ
ဤမျှကာလပတ်လုံးများအတွက်ခရီးသွားပြီးနောက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပုံပြင်များကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြောင်းလုံးဝသေချာပါသည်။ ကြောင်းသေးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပြီမဟုတ်သို့မဟုတ်လုံးဝမေ့လျော့နေကြသည်တောင်မှသူတို့အား။ အထူးသဖြင့်, စာအုပ်ဖတ်နေလူတစ်ဦးအဖြစ်တာရှည်သူဖြစ်ချင်ပါဘူးအဖြစ်, သင်တန်း, လမ်းလွဲမရနိုင်ပါ။ ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်၏ပုံစံအတွက်ပုံပြင်များကိုမှန်ကန်ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်မှုတ်သွင်းပေမယ့်ခရီးသွားလုံးဝငါတို့သည်ကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနှင့်မြင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရေခွံပေါ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ရသောလမျး၌အဖြစ်မှန်ရောင်ပြန်ဟပ်စဉ်တစ်ခုစိတ်ကူးယဉ်ဒြပ်စင်ပိုမိုပါဝင်သည်နေကြသည်။
ခရု Roving အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook ပေါ်မှာခရု Roving
hitchhiking, ပုံရိပ်တွေ, ခရီးသွား | | rating:5/ 30